ရန်ကုန်မြို့တော်နှင့် စီမံကိန်းများကိစ္စအသိ ပေးကြေငြာချက် | Danya Wadi
Browsing: » Home »ဆောင်းပါးများ»ရန်ကုန်မြို့တော်နှင့် စီမံကိန်းများကိစ္စအသိ ပေးကြေငြာချက်	Leaveacomment
ရန်ကုန်မြို့တော်နှင့် စီမံကိန်းများကိစ္စအသိ ပေးကြေငြာချက်	Posted by danyawadi on March 6, 2016 in ဆောင်းပါးများ	အစိုးရ တာဝန်မလွှဲပြောင်းမှီ အဆောတလျှင် ချထားပေးနေသော စီမံကိန်းများ စည်ပင်မှခွင့်မပြု၍ တရားမဝင်ကြောင်း ဦးခင်လှိုင်(ဇောတိက) မှ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြီ။
စာအမှတ် ။ ညကခ/၇၉/၂၀၁၆/စသက (၇)
ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၆ – ခုနှစ် ၊ မတ်လ ( ၄ )ရက်
ရန်ကုန်မြို့တွင် စီမံကိန်းများ အဆောတလျင် ချထားပေးခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍
သက်ဆိုင်သူများ သိရှိစေရန် ကြေငြာခြင်း
၁။ ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၆)ရက်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပုလဲမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် တင်သွင်းခဲ့သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်ပိုင်း ဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံပိုင်မြေ၊ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ရောင်းချမှု၊ လွှဲပြောင်းမှု၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်နေမှု၊ နိုင်ငံပိုင်စီမံကိန်းများကို အစိုးရတာဝန်မလွှဲ ပြောင်းမှီ အလျင်အမြန် စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နေမှု များအား နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏အကျိုးအတွက် ဟန့်တားထိန်းကျောင်း တည့်မတ်ပေးရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အား တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန်းပါ ကုမ္ပဏီများအား မြေနေရာများ ချထားပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနပိုင် မြေကွက်ပေါ်တွင် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံစီမံကိန်း ချထားပေးခြင်းနှင့် အလားတူ စီမံကိန်းသစ်များ ထပ်မံချထားပေးရန် အဆောတလျင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်ကို သိရှိရပါသည်။
၃။ စီးပွားရေးစီမံကိန်းများ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ဥပဒေပုဒ်မ(၅၃) – ကော်မရှင်သည် ပုဒ်မ(၃)နှင့် ပုဒ်မ(၅)တို့အရ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြု ရာတွင် အရေးကြီးသည့်ကိစ္စရပ်အဖြစ် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာပါက ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှတစ်ဆင့် အနီးကပ်ဆုံး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ရမည်။
နည်းဥပဒေပုဒ်မ(၁၂၃) – ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ငှားရမ်းခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့်ရသော မြေနေရာတွင် မူလ အဆိုပြုချက်နှင့် မကိုက်ညီဘဲ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေမည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ ဆောင်ရွက်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် အသံဆူညံမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအရသော် လည်းကောင်း ယင်းနေရာတစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်သူများအား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပေါ်စေလျှင်ဖြစ်စေ၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိသူ သို့မဟုတ် ယင်းနေရာတစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်သူများက တရားဝင် ကန့်ကွက်လာလျှင် ဖြစ်စေ ကော်မရှင်သည် လိုအပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်အရ ဆက်လက်ခွင့်ပြုရန် မသင့်ပါက ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည်။
နည်းဥပဒေပုဒ်မ(၁၂၅) – အောက်ပါမြေများအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ် လုပ်ကိုင်ရန် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိ ။
(ခ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများက သတ်မှတ်ထားသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ၊ သဘာဝ အမွေအနှစ်ဒေသများ၊
(ဂ) နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် ကန့်သတ်ထားသည့်မြေများ၊
(ဃ) အမှုအခင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် မြေများ၊
(င) နိုင်ငံတော်က အခါအားလျော်စွာ ကန့်သတ်တားမြေများ၊
(စ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြောင့် မြို့ပြလူနေထိုင်ရာ ရပ်ဝန်းအတွင်း အများပြည်သူ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ အသံဆူညံမှုဖြစ်စေခြင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုထိခိုက်စေခြင်း စသည့် အခြေ အနေဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အရပ်ဒေသ သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံတည်ရှိသည့် မြေများ၊
နည်းဥပဒေပုဒ်မ(၁၂၉) – ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် မြို့ပြတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဟိုတယ်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ လူနေထိုင်ရန် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ဆက်သွယ်ပို့ဆောင်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါက လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့်ဒေသပေါ်မူတည်ပြီး နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက ရေးဆွဲထားသည့် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအမံများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ယင်းတို့က ခွင့်ပြုမှသာလျှင် ကော်မရှင်သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ရမည်။
၄။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နယ်မြေအတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Marga Landmark Development ကုမ္ပဏီအား ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် သစ္စာလမ်းဒေါင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီး ဌာနပိုင်မြေနေရာ (၁၇.၀၇)ဧကကို ချထားပေးခြင်းကိစ္စ၊ ဦးအိုက်ထွန်းပိုင် ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်ရှိ သုံးဧကခွဲ (မြန်မာ့မီးရထားရုံးချုပ်ဟောင်း)မြေနေရာအား ချထားပေးခြင်းကိစ္စ၊ Adventure Myanmar နှင့် သုခရတနာ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုတို့အား လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်ရုံး (UMFCCI)အနီးရှိ ယခင်ကုန်သွယ်ရေးဌာနပိုင် ဂိုဒေါင်ရုံးဟောင်းနေရာ၊ မြေ(၉)ဧကအား ကုမ္ပဏီ တစ်ခုလျှင် ၄ ဒဿမ ၅ဧကနှုန်းဖြင့် ချထားပေးရန်စီစဉ်နေခြင်းကိစ္စ၊ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှု အသင်းချုပ်(UMFCCI)ဥက္ကဌဦးဝင်းအောင်နှင့် IBTC ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင် ဦးအောင်ကျော်မိုးတို့ ပူးပေါင်း ထားသည့် Andaman Alliance Healthcare အား ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဒေါင့်ရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေနေရာ (၄.၄ဧက)ကို ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်းအတွက် မြေနေရာချထားပေးခြင်းကိစ္စများ အဆောတလျင် ချထားဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၅။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အပိုဒ်(၃)တွင် ဖော်ပြထားပြီးသော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေပုဒ်မ (၁၂၉)ပြဋ္ဌာန်းချက် ပါအတိုင်း လိုက်နာရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ကိုင်လိုသည့် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများသည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီထံသို့ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်အတွက် ယနေ့ထိလျှောက်ထားခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ အစည်းအဝေးတွင်လည်း ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ပြခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်း(လုံးဝ)မရှိခဲ့ပါ၍လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပုဒ်မ (၅၃) အရ ယင်းစီမံကိန်းကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြဆောင်ရွက် ဆွေးနွေးထားခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ စီမံကိန်းများ အဆောတလျင် ချထားပေးခြင်းကိစ္စကို ရပ်ဆိုင်းထားရန် အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ခွင့်ပြုချက်ပေးထားသော အဆိုပါစီမံကိန်းများအားလုံးသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်လည်းကောင်း တည်ဆဲနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ဆန့်ကျင်ကွဲလွဲ ကိုက်ညီမှုမရှိပါ၍ အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်နိုင်ပါကြောင်း စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် အများပြည်သူ သိရှိစေရန် ကြေငြာအပ်ပါသည်။ ဦးခင်လှိုင်
Copy from.. ကို Zarni Tike
← ငလျင်ကြီးလှုပ်လျှင် သတိထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်များ သုံးသပ်ပြောကြား	ဆရာကြီးဦရာဇတ်​အ​ကြောင်း →
Popular Posts	GTC ကျောင်းသား/သူနှစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင်	ဓည၀တီဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သော သတင်း၊ ဆောင်း ပါး၊ ဓါတ် ပုံ များ ပေး ပို့ လို ပါ က danyawadi9@gmail.com နဲ့ ဆက် သွယ် ပါ ။ . . . If you want to post any real documents such as , History,Articles , photos and News ,Contact here.	THIT HTOO LWIN Movies, Videos, VCD, Latest	ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေကြား ခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာ ဖြေရှင်းလို့ မရဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း	ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကိုစစ်ဗိုလ်ကြီးကအဓမ္မ ကျင့် ပါ တယ် ဆို တဲ့ ကိစ္စ အ တွက် ဆယ် တန်း ကျောင်း သူလေး ယွန်းသော် တာမြတ်နိုး ရဲ့ တောင်း ပန် စာ...	သံလျှင် GTC ကစုံတွဲ၏လုပ်ရပ်	The History of ROHINGYA MUSLIMS of Arakan (Rakhine state) , Burma.	လူနည်း စု၏ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှုထား၍ မရ ဟု နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော် က ဆို	မြန်မာ - English အင်္ဂလိပ်- အဘိဓါန်	Rohingya to English Dictionary ( A to Z )	Recent Posts	လူမှုထူးချွန် ပထမ အဆင့်ကို ပထမဆုံး ရရှိသည့် ဟာဂျီမ ပျဉ်းမနား ဒေါ်ပု
The Slow Genocide of the Rohingya by Amartya Sen
ဒီမိုကရေစီ ခေတ်တွင် လက်နက် ကိုင် တောင်းဆို မရဟု ဗိုလ်ချုပ် မှူးကြီး ပြော
ရခိုင် အကြံပေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဖီ အာနန် ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မိန့်ခွန်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြေကြား ခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာ ဖြေရှင်းလို့ မရဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း
မလေးရှား က မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ကျေးဇူး ရှိတယ် လို့ ပြော လိုက် တဲ့ မလေးရှား နိုင်ငံ ခြား ရေး ဝန်ကြီး ဟောင်း
ရခိုင် အကြံပေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ သမ္မတ ဦးထင်ကျော် နဲ့ တွေ့ဆုံ
အင်တာဗျူး(237)
Total guests visited လာဖတ်သည့် ဧည့်သည်ပေါင်း 3,916,926 ဦး
Visitors’ Countries Since 16-11-2012;လာဖတ်သူတို့ နိုင်ငံ	Click here to read the articles by date-posted ရက်စွဲ အလိုက် ဖတ်ရှုရန် March 2016